Tantarao Isan'Andro: Loza manambana?
Nahita ny zava-nitranga tamin'ny faran'ny herinandro dia variana ihany. Hetsika sosialy tsy hay tohaina ve? Ny andaniny miasa handaminana ny tanàna mba tsy ho korontana (fa tsy gidragidra) no ahitana an'Antananarivo sady mampihatra lalàna, ny ankilany kosa miavo-tena hamelomana ny tenany sy ny vady aman-janany eny amin'ny toerana tsy manara-dalàna.
Resaka fivarotana amoron-dalana sy tafiditra anaty lalana eto Antananarivo ihany izany tononina eto izany. Ny alahady lasa teo teny Mahamasina dia nisy ny fifandonana teo amin'ny polisy kominaly sy ny mpivarotra amoron-dalana noho ny resaka fandraofan'entana. Io fandraofan'entana io no tena fototr'ilay gidragidra satria heverin'ny mpivarotra tsy manara-dalàna ho fangalarana ny entany izy io. Ny maraina anefa hakan-dry zalahy vola 500Ar ireo mpivarotra ireo ho toy ny fiantohana fa tsy esorina amin'ny toerany amin'io andro io. Nisy ny naratra ary nisy ny fisamborana tamin'io fotoana io.
Nitohy ny alatsinainy izany gidragidra izany, araka ny nambaran'ny gazety, ka teny Analakely indray no kianja nifandonana. Hitako tsipalotra fa teny ambony kamiao daholo ry zalahy mpandroaka entana fa tsy hitako nandeha an-tongotra nandroaka entana ny folakandro nandalovako teny. Tsy nahalala aho fa efa nisy zavatra nitranga teny Analakely (Ambodifilao, Soarano, Behoririka) tamin'io fotoana io fa ny mpivarotra kosa teny amin'ny toerany ihany. Antokon'olona tsy manara-dalàna no mivondrona ka sarotra ny raharaha rehefa tsy miditra fanapahan-kevitra hentitra mety mahatonga firohotana tsy ampoizina ihany koa anefa.
Izay no loza manambana: mivondrona ny olona efa nampianarina hivondrona efa ho telo taona izao ary miaraka amin'ny herisetra. Ny mampiavaka azy ny vondron'olona "sahirana" saingy ao anatin'ny tsy manara-penitra amin'ny zavatra ataony no mivondrona fa tsy sarangan'olona antonony izay tsy hita intsony. Mbola misy fanantenana kokoa ireo noho ny saranga antonony tsy mahay mivondrona
Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 2:56 PM